Horseed oo dooneysa in ay soo Yareyso Farqiga dhibcaha ee hoggaanka horyaalka looga hayo, yey la Ballansantahay? | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA SOMALIDA - Horseed oo dooneysa in ay soo Yareyso Farqiga dhibcaha ee hoggaanka horyaalka looga hayo, yey la Ballansantahay?
Horseed oo dooneysa in ay soo Yareyso Farqiga dhibcaha ee hoggaanka horyaalka looga hayo, yey la Ballansantahay?
Kooxda Horseed ee Ciidanka Xoogga dalka ayaa waxay maanta kulan ka tirsan horyaalka Somalia Premier League la qaadan doontaa naadiga Madbacadda Qaranka.
Ciyaartaas ayaa dhibcaha kala sarreynta horyaalka soo dhimi karta, iyadoo Horseed ay gaari doonto 24 dhibcood, haddii ay badiso isla markaana ay Dekadda u jirsan doonto 3 dhibcood oo kaliya.
Horseed ayaa hoos u dhac waxaa ku noqotay Khasaarihii ugu horreeyay horyaalka oo dhowaan ay la kulmeen, markii ay foodda is dareen Banaadir SC, taasoo ka dhigtay in hoggaanka horyaalka looga qabto 6 dhibcood, in kastoo ay hadda iyadu kulan dheeri ah ciyaari doonto maanta.
Dekadda oo Sanadkii hore hanatay horyaalka dalka ayaa markii labaad qorshaha ku darsaneysa in ay koobkaas ku guuleysato.
Macallin Cumar Caruus oo ah hoggaamiye hanashada Horyaalka dalka si wanaagsan u garanaya ayaa isku deyi doona Sanadkan in uu horyaalka ka dhigo mid Tartan ku jira, isla markaana aan koox loosii saadaalin Karin, waxaana Horseed oo uu hadda hoggaaminayo ay dooneysaa in ay ugu yaraan Sanadkan qaadaan horyaalka.
Kala Sarreynta Horseed iyo Banaadir SC min 21 dhibcood ayey hadda leeyihiin, Horseed haddii ay badiso waxay tegi doontaa 24 dhibcood iyadoo Seddax ka hooseyn doonta kooxda 27-ka leh ee Dekadda.
Madbacadda ayaa iyaduna horyaalka dalka ku billaabatay ciyaaro wanaagsan, walow ay muddooyinkan dambe sameyneysay hoos u dhac, waxaana dhankooda ay doonayaan in ay Sanadka dambe kasii mid ahaadaan kooxaha heerka Koobaad ee Dalka.
Ederson oo dhigay Guiness World Record